सबैको बत्ती बनेका राष्ट्र सपुत कुलमानलाई अर्का राष्ट्र सपुत रबि लामिछानेले गरे यसरी सलाम ! हेर्नूहोस यो बिषेष भिडियो। – पुरा पढ्नुहोस्……
सबैको बत्ती बनेका राष्ट्र सपुत कुलमानलाई अर्का राष्ट्र सपुत रबि लामिछानेले गरे यसरी सलाम ! हेर्नूहोस यो बिषेष भिडियो।
उज्यालो भएको खुसीमा हामीले देश अँध्यारो पार्नेहरुलाई चटक्कै बिर्सियौंं ! देशमा तिहारको माहोल छ । चारैतिर झिलिमिली नै झिलिमिली छ । कुनै समय यस्तो थियो कि उज्यालोको यो चाड दिपावली मनाउँदा कति खेर बत्ती जान्छ भनेर मुख चाँही अध्याँरै पारेर बस्नु पर्ने हुन्थ्यो । जलस्रोतको धनी देशले बत्ति बेच्नु पर्नेमा बाल्न पाउँदा पनि युद्ध जिते जस्तो गर्नु परेको छ ।
लोडसेडिङमुक्त तिहारः सबैको बत्ती बनेका कुलमान !तपाईको कुनै व्यक्तिगत कारण बाहेक विजुली बत्तीको कारण यो तिहारमा तपाईको घर अँध्यारो छैन । अर्थात उज्यालोको यो पर्व तिहारमा तपाईको घरमा विजुलीबाट बल्ने थरि थरिका बत्तीहरु चम्किरहेको छ ।
वि.सं. २०७३ साल असोज १ गते उनले प्रमुख कार्यकारी निर्देशकका रुपमा प्राधिकरण प्रवेश गरेसँगै लोडसेडिङ हटाउन थाले । माग, आपूर्ती भार सम्प्रेषण केन्द्र, ट्रान्सफर्मर, सब स्टेशन, फिडर र जनशक्तिको उचित व्यावस्थापनकै कारण २०७३ सालको लक्ष्मीपूजाको दिन विजुली बलिरह्यो । यहि सफलताबाट हौसिएका कुलमानले लोडसेडिङ सँधैका लागि हटाउने योजना सुरु गरे । र सफल पनि भए ।
अहिले स सना झुपडीदेखि महलसम्म यसरी झलमल्ल बत्ती बलिरहेको छ । अहिले देशका विभिन्न स्थानमा स्थानीय घर अगाडिको सडकको नाम, चोकको नाम कुलमान घिसिङको नामबाट राखिएका छन् ।
वर्षौदेखि लोडसेडिङको मार खेप्दाको समयलाई अहिले कसैले सम्झन मन गर्दैनन् । धन हुनेहरुको इन्भरटर व्यट्रिले साथ दिएपनि सामान्य नेपालीहरुको लागि बत्ती, टुक्की, दियालो लगाएतले काम चलाउनु पर्दथ्यो । अहिले समय फेरिको छ । घर घरमा विजुली बत्तीले तिहारको महोल नै फेरिएको छ ।
लोडसेडिङ गराउनेहरुलाई किन कारवाही भएन ?लोडसेडिङ अन्त्य गर्नका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कुनै नौलो प्रविधि नभई भएको स्रोत र साधनलाई उचित व्यवस्थापन गरेको बताउँदै आएका छन् । तर प्रमुखका रुपमा कुलमान घिसिङ आउनु पूर्वको र अहिलेको विद्युत उत्पादन र मागमा अकाश पतालको फरक थिएन । तर व्यवस्थापन गर्ने प्रमुखको क्ष्मतामा भने आकाश पतालको भिन्नता भएको तीन वर्ष अघिको तिहार र अहिलेको तिहारले प्रमाणीत गरिसकेको छ ।
प्राधिकरणकायस अघिका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेले त अझ लोडसेडिङमुक्त नहुने दार्ब गर्दै लोडसेडिङ अन्त्य भएमा सार्वजनिक पद धारण नगर्नेसमेत बताएका थिए । अहिले लोडसेडिङको अन्त्य भयो ।
तत्कालीन समयमा लोडसेडिङ हुनुको पछाडि प्राधिकरण भित्रकै उच्च पदस्थनै निजी कम्पनीहरुको आर्थिक प्रलोभनमा फस्ने गरेको धेरैको आशंका छ । लोडसेडिङ हटेको दुई वर्ष हुनलाग्दा पनि लामो समयस लोडसेडिङको अँध्यारोमा राख्ने प्रधिकरणका उच्च पदस्थ कर्मचारी, तत्कालीन उर्जामन्त्री लगायतमाथि छाविन समेत भएको छैन ।
Prevआजको राशिफलः- बि.स. २०७५ साल कार्तिक २३ गते शुक्रबार इश्वी सन् २०१८ नोबेम्वर ०९ तारीख…
Nextहेर्नुहोस् तत्कालीन युवराज दीपेन्द्रले गीत गाउँदै नाचेको दूर्लभ-हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
प्रधानमन्त्री ओलीको चमत्कार ! दिल्लीमा चल्यो रुवाबासी …पूरा हेर्नुहोस
आकाशबाट ‘हिलो’ पानी पर्नुको कारण यस्तो पो रहेछ (पुरा पढ्नुहोस्)
वाहाः अशोकले आफ्नै गाउँमा पुगेर एक्लै समाले स्टेज -हेर्नुहोस( भिडियो सहित )